Miselela Imisebenzi Yokudayela Yakho Yabathengisi Bakho Ngezingxoxo Ezibukhoma | Martech Zone
Shintsha Imisebenzi Yokudayela Yakho Yabathengisi Bakho Ngezingxoxo Ezibukhoma
NgoLwesibili, Septhemba 22, 2015 UJenn Lisak Golding
Vala Up Of Hand Holding Telephone ngokumelene nesizinda esiluhlaza
Sekungamashumi eminyaka, ukubiza okubandayo kube yinkinga yabathengisi abaningi, lapho bachitha khona amahora bezama ukuthola umuntu ocingweni kungabuyi lutho. Kuyinto engasebenzi kahle, enzima futhi engalindelekile. Kodwa-ke, njengoba kukhona ukuhlangana okuqondile phakathi kwevolumu yokuthengisa ephumayo kanye nezinga lokuthengisa elivaliwe leqembu, ukubiza okubandayo kungububi obudingekayo emaqenjini anamuhla okuphuma noma angaphakathi okuthengisa.
Vele, abathengisi abakwazi ukuthembela ngaso sonke isikhathi kunethiwekhi asebevele benayo yokushayela lokho kuthengiswa, futhi kudingeka ukuthi kube nendlela abazongena ngayo ezimakethe ezingasetshenziswanga noma kumachibi okuthola ithemba. Kepha, njengawo wonke umsebenzi, kunemisebenzi abathengisi bakho okufanele ngabe bachitha isikhathi kuyo nokunye okungasisebenzisi kahle isikhathi sabo.
Izingxenye Zokushaya Okubandayo
Ngenkathi ukubiza okubandayo kungububi obudingekayo kwinqubo yokuthengisa, akusho ukuthi abathengisi bakho kufanele baphathe zonke izici zalo. Kunezinto ezintathu ekubizeni okubandayo:
Dala uhlu: Lokhu kubandakanya ukuqoqa, ukuqinisekisa, nokuhlanza uhlu olulindelekile lwabamele abathengisi bakho abaphumayo abazobashayela.
Iyashayela: Umsebenzi wangempela wokudayela, ofaka ukusebenzelana nokwaziswa kwefoni, ukukhuluma nabagcini bamasango nokuhamba ngezinhlelo ezenzakalelayo.
lokuvala: Le ngxenye igxile kuphela ekusebenziseni i- ingxoxo ebukhoma ngethemba lokukhuthaza ukuthenga.
Kulezi zinto ezintathu, kuyacaca ukuthi umsebenzi obaluleke kakhulu wokuthengiswa okuphumayo noma ngaphakathi kufanele ube ukuvala.
Ukusuka engxoxweni ephathelene nohlu lwethemba, ukudayela kungenye yezinto ezingakhiqizi kakhulu kubathengisi abathengisayo. Cabanga ukuthi singakanani isikhathi abasichithayo ekushayeleni nasekushintsheni izinombolo lapho kungenzeka ukuthi bagxile kokukwenza kangcono kakhulu: ukuthengisa umkhiqizo wakho noma ukunikezwa kwensizakalo.
Eqinisweni, kuthatha izingcingo ezingama-21, ngokwesilinganiso, ukwenza ingxoxo eyodwa ebukhoma, futhi abathengisi abathengisayo benza amakholi angama-47 ngosuku.
Ukukhiqiza okuningi kulahleka ngokuthi abathengisi bakho babhekane nokudayela nokuzulazula kwezihlahla zefoni ezingapheli. Kuthiwani uma abathengisi bakho bengafanele ukudayela nokho kepha bebehlinzekwa ngezingxoxo ezibukhoma?
Kuyini Ukudayela Kwethimba?
Akuyona imfihlo ukuthi amabhizinisi amaningi akhipha imisebenzi ehlukahlukene emabhizinisini awo, ngakho-ke kungani ukudayela kufanele kwehluke?
Ukudayela kwethimba inikezela amaqembu okuthengisa ngabenzeli bezingcingo abaxhumanisa abathengisi bakho nabenza izinqumo ngesikhathi sangempela, ngaphandle kwesidingo sokudayela. Kuyinto kwehlukile kulungiselelwa ukuqokwa ngokuthi lawo ma-ejenti awabophezelekile ekufundeni ngomkhiqizo noma ngomsebenzi wakho; bamane banesibopho sokukhuluma nabagcini bamasango, ukuzulazula kulezo zicelo zefoni, njll. ukuze bakwazi ukuxhuma ama-reps akho ngqo kulowo owenza izinqumo, banikeze izingxoxo ezibukhoma ngethemba.
Ukudayela kwethimba kuyinkimbinkimbi, kuyashesha futhi kulula, ngenkathi kunikezela nangezinzuzo ezibonakalayo. Uma umenzeli wokudayela engakwazi ukuxhumana nomenzi wesinqumo, badlulela kwesinye ngenkathi umthengisi wakho ethengiswa kuphela lapho ingxoxo bukhoma isilungile. Kunemiphumela ecacile, ngokuqonda ukuthi zingaki izingcingo ezenziwe, zingaki izingxoxo ezaba khona nezinga lokuxhumeka.
Faka esikhundleni semisebenzi yokudayela ye-reps yakho ngezingxoxo ezibukhoma ngokutshala imali ku- isevisi yokudayela kwethimba. IMonsterConnect, umxhasi wethu omusha, wethula izingcingo eziyi-150-200 nezingxoxo eziyi-8-12 ezibukhoma nabenza izinqumo ngehora, enikezela ngemiphumela ephindwe izikhathi ezingama-40 namadili amaningi avaliwe.
Cela ukuhlolwa kokuhlola kwamahhala kwamahhala noma idemo yensizakalo yokushaya iqembu le-MonsterConnect namuhla:
Ukuhlolwa Kokuhlola Okuzama Mahhala Cela i-Demo